Waa kuma ciyaaryahanka ka tirsan kooxda Chelsea ee doonaya inuu Macallin Maurizio Sarri u raaco Juventus? – Gool FM
Waa kuma ciyaaryahanka ka tirsan kooxda Chelsea ee doonaya inuu Macallin Maurizio Sarri u raaco Juventus?
Haaruun May 24, 2019
(London) 24 Maajo 2019. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Chelsea ee Gonzalo Higuain ayaa la soo warinayaa inuu diyaar u yahay inuu macallin Maurizio Sarri kula midoobo Juventus xilli ciyaareedka soo socda.
32-sano jirkaan ayaa ku guuldarreystay inuu bandhig cajiib ah sameeyo intii lagu guda jiray qeyb ka mid ah xilli ciyaareedkan oo uu amaah ku joogay garoonka Stamford Bridge, waxaana la filayaa inuu dib ugu laaban doono kooxda milkiyaddiisa iska leh isbuucyada soo socda.
Sida uu warinayo warsidaha Tuttosport, Higuain ayaa doonaya inuu kooxdii saddexaad kala mid noqdo oo uu kaga hoos ciyaaro macalli Sarri, tababarihii hore ee kooxda Napoli ayaana warar xan ah ay sheegayaan inuu buuxin doono booskii Massimiliano Allegri, isagoo noqon doona macallinka xiga ee Juventus.
Higuain ayaa 36 gool dhaliyey 35 kulan oo saftay intii lagu guda jiray waqtigii uu Sarri tababaraha ka ahaa kooxda Napoli, waxaana la rajeynayaa inuu dib u soo ceshado qaab ciyaareedkiisii wacnaa marka uu dib ugu laabto garoonka Allianz xilli ciyaareedka soo socda.
Dhinaca kale kooxda Chelsea ayaa go’aan ka gaari doonta mustaqbalka macallinkan 60-sano jirka ah kaddib marka ay Arbacadaha soo aaddan la ciyaaraan Arsenal Final-ka tartanka Europa League.
Kooxda Real Madrid oo war rasmi ah kasoo saartay hadal uu maanta sheegay Mauricio Pochettino
Valverde oo si RASMI ah u magacaabay liiska ciyaartoyda Barcelona ee ka qeyb galaya kulanka finalka Copa del Rey